opinion Archives - Page3of 30 - News @ M-Media
“မြန်မာခရစ်ယာန် နှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပူးပေါင်းမှုမှသည် သဟဇတ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီသို့”
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မြင်သစ် ရေးသည်။ ယေရှုခရစ်တော် (မေတ္တာပို့သအပ်ပါ၏) မွေးဖွားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အခါသမယပါ။ ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ နေ့ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခရစ်ယာန်နဲ့ မွတ်စလင်မ် ပညာရှင်တွေ အကြား တွက်ချက်မှုနဲ့ သဘောထား[Read More…]
December 25, 2016 — သူ့အမြင်
မလိုတစ်​မျိုး လိုတစ်​မျိုး ဥပ​ဒေကြားက သား​ကောင်​များ (သူ့အမြင်)
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၁၆ ဆွေမွန်ရေးသည်။ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုချင်းတူတယ်။ ပုဒ်မတူတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြစ်ဒဏ်မတူပါချေ။ . ဖြစ်စဉ်-၁ ———– KIA တပ်မတော်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်ရန်ပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရ သူများဖြစ်ကြတဲ့ ကိုဇော်မင်းထွေး ၊[Read More…]
December 23, 2016 — သူ့အမြင်
“ဗလီဝတ်ကျောင်းဝန်း၊ ချာ့ခ်ျကျောင်းဝန်းထဲက မြန်မာ့တပ်မတော်” (သူ့အမြင်)
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မြင်သစ်ရေးသည်။ ဒီတလော မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူမှုမီဒီယာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ တပ်မတော်နယ်လှည့်ဆေးကုသအဖွဲ့ရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေနဲ့ ချာ့ခ်ျကျောင်းတွေမှာ အခြေပြုပြီး ဆေးကုသတဲ့ သတင်းဟာ အတော်လေး ရေပန်းစားနေပါတယ်။ အကောင်းဖက်က ချဉ်းကပ်ဆွေးနွေးတဲ့[Read More…]
December 18, 2016 — သူ့အမြင်
အောက်တိုဘာ ၂ ၊ ၂၀၁၆ M-Media ကျနော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ သူခိုးမိတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီသူခိုးကို ရဲလက်အပ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ရပ်ကွက်ရုံးကိုအပ်ပေါ့၊ ပြီးတာပဲ။ လုပ်နေကြတာက အဲဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကို မအပ်ခင် အဲဒီသူခိုးကို လူတွေက ဝိုင်းထိုးကြသေးတယ်။ ကားတိုက်မှုဖြစ်တယ်။[Read More…]
October 2, 2016 — သူ့အမြင်
အသားအစ်လက်ချာ (သို့) အယောင်ဆောင် မေတ္တာဝါဒီများသို့ စောင်းတီးခြင်း
စက်တင်ဘာ ၁၃ ၊ ၂၀၁၆ သမာဓိ ရေးသည် . စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အီဒွလ်အသွဟာ စွန့်လှူဒါနပြုမှု (အသားအစ်) ပွဲတော်ဟာ တစ်နှစ်မှတစ်ခါ လူစိတ်ဝင်တတ်တဲ့ အုပ်စုတစ်စုရဲ့[Read More…]
September 13, 2016 — သူ့အမြင်